Lahatsary: Vehivavy Manova Ny Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2011 15:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, Español, English
Fikarohana iray niainga avy aminà fantina lahatsary nakarin'ireo mpikambana no nampivoitra karazanà tetikasa maro mahazendana izay mifantoka amin'ny fahefan'ny vehivavy hanova ny fiarahamonina sy hanatsara azy ireny.
Due mani avy amin'i dino_olivieri CCBY
Ny tanànan'i Poso ao Sulawesi, Indonezia no nobanjinina tamin'ny resaka herisetra ifanaovan'ireo samihafa finonana efa ho ampolon-taona mahery. Ramatoa iray avy ao Poso no nanapa-kevitra hanangana ny Akademian'ny Fandriampahalemana ho an'ny vehivavy mba hahatonga azy ireo ho fanoitran'ny fiovàna. Ny lahatsary manaraka dia hira famantarana ny horonantsary fanadihadiana iray ilazana ny tantaran'ny fomba nifanatonan'ireo vehivavy Kristiana sy Silamo hiaraka hanangana hoavy mandry fahalemana ho azy ireo sy ny vondrom-piarahamonin-dry zareo:
Sekoly an-kalamanjana iray no natao teo ambany alokaloka manoloana ny varavaran'ny tranon'ny ramatoa iray izay monina ao amin'ny faritra nisy ady taloha ao Poso, Indonezia. i Lian Gogali no mampianatra ireo vehivavy sisam-paty tamin'ny herisetra nifanaovana efa ho ampolo-taonany hoe ahoana no fomba hahatonga azy ireo ho lasa mpanenta momba ny fandriampahalemana eo anivon'ny fianakaviany ary koa eo amin'ny fiarahamonina. Ny Peace Agency, na Masoivohon'ny Fandriampahalemana horonantsary mampihetsi-po sy mampiasa saina tokoa, mitantara ny olana atrehan'ny vehivavy sy ny fandresena azon'izy ireo tratrarina ao Indonezia. izy io dia maka ny fiainana tena iveloman'ireo eny anjorom-bala ao amin'ny firenena mbola miady foana ny hisian'ny fitoviana zo sy ny firindrana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina.
Feon-kira Famantarana Manasongadina ny Fanadihadiana Nataon'ny The Peace Agency avy amin'ny Spotted Frog Productions.
Ao San Francisco, USA, ireo renim-pianakaviana Latino dia tonga miaraka mba hianatra mikasika ny fomba ahitàn'ireo zanaka LGBTQ sy ny fianakavian'izy ireny fitoniana sy fitiavana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina mandray azy ireny, amin'ny fizaràna ny fanantenan-dry zareo sy ny tahony. Ny Somos Familia (Fianakaviana iray isika) dia mampiseho ny fomba fijerin'ny fikambanan-dry zareo amin'ny alalaln'ity lahatsary manaraka ity [es] miaraka aminà teny Anglisy ery ambaniny:
Somos Familia koa dia namokatra lahatsary hafa antsoina hoe “Drops of Water” izay ahitàna ny renin'ireo tanora latina avy amin'ny LGBTQ mizara ny “fandehan'”ny tantaran-dry zareo:
Ao Kenya, vondrom-behivavy iray no sahy manonofy hoavy izay hahafahan-dry zareo mahazo vola misimisy kokoa mba handefasany ny zanany any an-tsekoly sy hiantohany nhy hoavin'izy ireny. Amin'ny fanambàrana ny tahiry kelin-dry zareo dia mifanampy izy ireo mba hanomboka fandraharahàna madinika ka arakaraky ny traikefa sy ny hadisoana hitany no nanombohan-dry zareo nahita fa afaka manao zavatra be kokoa mihoatra noho izay nosainina ry zareo. Avy amin'ny alàlan'ny fitrandraha avy ifotony ao amin'ny aterineto, tonga ny fanomezana ary dia afaka nividy omby 3 ry zareo sy afaka nana fitaovana hanombohana ny fiompiany, tetikasa niraisana izay efa ela no nanofisan-dry zareo azy. Io tantara io dia voalaza ao anatin’ity lahatsoratra am-biloagy ity ary ity lahatsary ity [en]:
Ity dia tantara marina avy ao amin'ny African Journal mikasika ny fomba hanefen'ny safidy ny ampitso. Ity dia tantaranà vehivavy Keniana 20 mamelon-tena izay manome lanja sy dikany ny fiainany nianinga avy amin'ny azo lazaina fa tsy nisy. Ity dia tantaranà vondron'olona iray avy amin'ny lafivalon'ny tany nisafidy ny hanome vintana ny nofinofy iray mba “hanana teboka fiaingàna” ary avy eo mihataka mitazana ny fandrosoany / fivoaran'izany. Ity dia tantaranà olona manampy olona mba hanangan-javatra manokana miainga amin'ny tsy misy. Ity dia tantara iray manainga ny rehetra hisaina fa ny safidy ataontsika dia manefy tokoa ny ho isika amin'ny hoavy sy ny hoavintsika.
Betsaka amin'itony tantara sy lahatsary manaitaitra ny saina itony no azo jerena ao amin'ny vohikalan'ny Voices of Women Worldwide.